Aries uye Taurus kuenderana: Hushamwari, Rudo & Bonde - Zodiac Zviratidzo
Aries uye Taurus kuenderana: Hushamwari, Rudo & Bonde
Ukama hweAries neTaurus hune zvisikwa zviviri zvine musoro uye zvakasindimara pachigaro. Zvakadaro, nzira inoenda kushamwari nerudo ndeyemhando uye inononoka. Taurus yakafanana neAries mushure mekushanduka kwemanzwiro. Tarisa kuTaurus kunge maAries akura akura. Iko kushanduka kweAries kunoguma mumurwere asi munhu ane simba. Izvi zvakashanduka maAries mumwe munhu anoziva kana chiito chehasha chichidikanwa. Ivo zvakare vanoziva kana kutsungirira kuchikunda zuva.
Taurus ndiye akanakisa chipangamazano weAries. Saizvozvowo, maAries ndiko kushanduka-kweTaurus. Ivo vanogona kudzidzisa Taurus zvichiri zvakanaka kupa kune wemukati mwana uye kukurudzira nguva nenguva. Iyo inobvumira kune mufaro mukuru uye spontaneity.
Aries anoda kunakidzwa, mukati nekunze kwemubhedha! Ivo vari kuenda uye vakazara nesimba. Taurus ndeye zvese nezve izvo zvinonzwa zvakanaka uye izvo zvakagadzikana panguva iyoyo. Ivo havaone chikonzero chekumhanyira kumafuro manyoro kana iwo mafuro avari ari akasvibirira, akadzika girini! Taurus inovenga shanduko uye inosimbirira pakuenderana. MaAries haakwanise kuimira kwenguva refu kana shanduko isiri mukutarisira! Mumwe munhu anozora mumwe nenzira isiriyo murudo urwu rwakaoma!
MaAries anonzwa akanamira uye kufinhwa. Taurus inonzwa sekunge maAries akanyanyisa kumanikidza uye anoda. Mapato ese ari maviri muAries neTaurus rudo mutambo anochera muzvitsitsinho zvavo uye vanoramba kufamba. Kana ivo vakagona kupfuura pamusoro pemitsipa yavo yakasindimara yakareba zvakakwana kuti vanyengere, rudo runobuda. Icho chikuru 'IF' hazvo!
Taurus inogona kudzidza kubva kuAries kuti shanduko haisi nguva dzose chinhu chakaipa. Taurus inogona kudzidzisa maAries kuti zvakanaka sei kunzwa kudzikama uye kukoshesa maitiro. Bato rega rega rinofanirwa kushandisa simba ravo muhukama. Vanofanira kukotama zvishoma kuti munhu wese anzwe kugutsikana.
Aries uye Taurus Tafura yezviri Mukati
Aries uye Taurus kuenderana
Aries uye Taurus Rudo
Aries uye Taurus Bonde
Aries Murume uye Taurus Mukadzi Kuenderana
Aries Mukadzi uye Taurus Man Kugarisana
Aries uye Taurus Vanoda Match Kuputira-Kumusoro
Taurus ndiye 'anononoka uye akatsiga anokunda mujaho,' rudzi rwemunhu. Aries ari 'Kufambisa mbongoro yako nekuti ini ndinoramba kurasikirwa,' mhando munhu. Iyo ndeyechokwadi ngano yekamba netsuro chete ikozvino vava gondohwe nehando murudo!
Kugovera kwakanaka uye nekunakidzwa kwekuseka kunogona kubatsira hukama uhwu kukura. Kubvumirana nguva zana kunodiwa. Ndiko kana hukama hweAries neTaurus hwuchachinja zvinonetsa kuita zverudo. Inguva yekugadzirisa mukati meumwe uye teerera nechinangwa chechokwadi. Kudya kune zvinodiwa nemumwe wako zvinoita kuti ive nani maAries uye Taurus kuenderana.
Taurus ndiye anoda zodiac. Aries anogona kuve iye Byronic gamba iro Taurus akashandisa yakawanda yehupenyu hwavo kurota futi. Nekudaro, kubatanidzwa kweAries uye Taurus kunounza pamwechete Byronic Gamba / kana iyo Heroine uye mudiwa weTaurean! Kune anofara zvachose mushure mevaviri, asi hazvisi pasina mhirizhonga yayo. Zvinetso zvinogona kuita kuti kudanana kuve kwakanyanya kutapira kana kungova kunhuwa!
Svumbunuro yekuita kuti hukama uhu hurambe kudzora uye kutora nguva yekuita kuti rudo rukure. Hukama hunotangira pamoto! Iko kupisa kuri uye kukwezva kwakasimba! Asi hapana kumhanyira kune rudo rurefu. Kudanana kudiki uye kwakawanda kwekudyidzana kwerudo rega rudo rukure uye kukura nenzira yechisikigo. Kumanikidza ruva kutumbuka kunogona kukanganisa kukura kwayo. Zvakatoipisisa, zvinogona kufa zvachose.
Nzira yekuenda kunonoka neAries neTaurus. Unogona kungonzwa Paul McCartney izvozvi, 'Mugwagwa murefu uye unotenderera, unotungamira kumusuwo wako ...' Ehe, pane chinopisa chinongedzo chaipo kubva pabhati. Ehe, vaviri ava havagone kuchengeta maoko avo kubva kune mumwe nemumwe. Taurus ndeyenyama. Aries ndeyepabonde uye ane nzara yekudyidzana panyama. Vaviri vacho vanoita kunge vanowirirana munzira yakakwana. Asi, havaiti. Uku kungori kufungidzira.
Taurus inozoda zvimwe kubva kuAries pane zvavanogona kunge vachida kununura ipapo. Aries zvese zvine chekuita nemuviri. Ivo vanofarira kuenda kubva kune imwe nguva kuenda kune imwe, saka kugadzirisa pasi hakusi pane menyu yezvinhu zvekuita. Taurus yakagadzirira rudo uye inoida. Kana iwe uchida kubatana neTaurus, zvese kana hapana. Taurus ndeye rudo.
Aries ingori yekubata kuzvipira phobic. Hukama hweAries neTaurus hunogona kutanga hunotapira asi hunogona kutendeuka kuva kuvava muminiti. Kana maAries achikanda kune zvishuwo, Taurus ichawedzera kugumbuka. Kana Taurus ikaomesa musoro pamusoro pechimwe chinhu, maAries anova smug. Vaviri ava vanogona kuzunza nyika yeumwe neumwe, kana kuzunza chikepe, kuchipurudzira pamusoro, nekunyudza chikepe.
Taurus inoda kuti iko kwekupedzisira kunyengera kuitwe. Ivo chisikwa chiri kuda kuti maAries agutse ese emanzwiro avo. Aries panzvimbo yegondohwe chaimo kuburikidza nekumbotarisa uye kusvika kune bhizinesi. Taurus haisi iyo. 'Kana iwe uchida kuki unofanirwa kutanga wadya kudya kwako kwemanheru,' Taurus anodaro! Aries anorova asi anoziva kuti hakuzove nemakuki kudzamara vaite sezvinodairwa naTaurus. Aries anoti, 'Asi, mukaka wekokoreti unoyamwa usina makuki!' Taurus inonyemwerera neine ruzivo rwekunyemwerera.
Aries ndeye zvese nezve chiitiko chemuviri. Itai kuti zviitwe uye pedzisai izvozvi! Zvino, kutenderera maviri. Taurus ndeye zvese nezve chiitiko. Tora nguva yako, uye round maviri ichave iri nani pane round one. Taurus inodzidzisa maAries hunyanzvi hwekuita kunonoka kugadzira rudo. Aries anodzidzisa Taurus kuti iyo nguva nenguva romp inongonakidzawo. Chinhu chikuru chekushushikana mupfungwa.
Aries ari kuyedza, uye Taurus iri mubhodhi. Kuva anochinjika uye kugamuchira kunovandudza maAries neTaurus kuenderana. Asi kurwadziwa hausi mutambo unozoitwa neTaurean. Vanonakidzwa nekuita bonde nekupindirana nyoro. Kana ikasanzwa zvakanaka, haina kufarira Taurus.
Aries ndemumwe ane chakakomba kink chinhu uye zvishoma zvechienzi chishuwo chekuzadzisa. Zvepabonde munzvimbo yeruzhinji kana kwavanogona kubatwa zvinokwidza kupisa kweAries. Kuti vese vari vaviri vawane kugutsikana, vanofanirwa kufunga zvishuwo zveumwe wavo.
Aries uye Taurus Kutaurirana
Ukama hweAries neTaurus hunoenderana nekutaurirana kwakanaka kwekupona. Kana zvinhu zvikatadza kufamba, haisi nguva refu gondohwe risati rasvika, uye bhuru racho riri kuita kurwa nemashoko. Iwo mazwi avanokandirana anogona kupwanya chero mukana wekuti rudo urarame. Vachafanira kuve nemoyo murefu kune mumwe nemumwe.
ndeapi makadhi makumi manomwe neshanu mudhishi rekushandisa?
Vanozoda kudzidza matauriro ekutaurirana. Ivo vanodawo kudzidza kuteerera. Iko hakuna nzvimbo yekuomesa musoro pano kana vachizoita kuti zvinhu zvishande pakati pavo. Ukama hweAries neTaurus huchave neakawanda akasindimara kusangana. MaAries anogonawo kunge aine tantrum sezvavanenge vachiedza nesimba ravo rese kurwisa naTaurus.
Taurus inoratidzira iwo mamwe maitiro akaomesa musoro, uye ivo havangobudike. Iwo maAries neTaurus rudo mutambo vaviri varwi vekurudyi. Zvinoreva kuti vava kuda kuita nharo panenge pasina kodzero. Ever. Aries anoda kutora chill piritsi. Taurus inoda kusunungura. Kana vese vari vaviri vakavhurika kuti vataurirane uye vachibvumira izwi rega rega kuti ritaure, ipapo kukanganisa kuri pamberi.
Aries uye Taurus Kurwisana
Kurwisana? Oo, vamwari vanodikanwa, tinotangira papi? Tiri kuisa gondohwe nenzombe munhandare imwe chete. Tiri kuvakanda mudziva remanzwiro uye tichivaudza, 'Endererai, zviitei!' Chii chatinofunga chichaitika? Ehe, pachave nekukonana muhukama hweAries neTaurus!
Zvinetso muhukama uhu zvakawanda. Taurus muridzi wemba uye anoda kuve akasununguka. Taurus inosununguka kwazvo muhukama hwomunhu haufambe kusvikira mumwe munhu abatidza moto pasi pavo. Ehezve, Aries ndiye chete munhu kuti aite izvozvo! Aries anoda kuve arikuenda uye achifamba kubva kune imwe nhanho kuenda kune inotevera. Taurus ine dambudziko rekuchengeta pamwe neAries 'uye yavo simba rekumhanya.
Taurus ndeye imba uye mhuri. Iwo mweya unoshuvira tsika. Aries ari kutsvaga kunakidzwa pazuva muhupenyu hwese! Kumba kunofinha. 'Ndiani gehena anoda kugara pamba?' Aries anoti! Asi haisi nguva refu vasati vawana mamiriro ezvinhu epamusha eimba yevaTaurean zvakanyanya sekuda kwavo! Kana Taurus yakangwara, uye ivo vari, ivo vanozoita iyo yekumusha nharaunda kuve inonakidza zvakare.
MaAries 'anotora matanho, uye izvi zvinogona kubatsira kuchengetedza hukama hwacho huchikurudzira. Taurus yakaiswa munzira dzavo, saka ivo vanokuya vaviri uye vanovachengetedza munzvimbo imwechete. Pane bharanzi inofanirwa kuvepo kana mumwe nemumwe achivimba nesimba remumwe.
runyorwa rwemapuraneti ese ari mune rezuva
Aries uye Taurus Polarity
Kana tichitaura nezvekuongorora nyeredzi, iyo pfungwa yekuwanda ichauya. Polarity inoreva masimba echikadzi neechikadzi. Aya masimba anonziwo Yin uye Yang. Yin munhukadzi. Yang murume. Chiratidzo cheyeredzi yega yega chinoenderana neimwe yesimba rataurwa pamusoro. Aries anoenderana Yang. Taurus inoenderana neYin. Kana iwo maAries neTaurus rudo mutambo uri muchiyero, aya masimba anowirirana. Iine simba reYang, maAries anotungamira. Iine simba reYin, Taurus iri kufara kugashira kutungamira kweAries.
Kana simba racho risina kuenzana, saka pane kugadzikana kwesimba. Kana polarization ikaitika, maAries ane masimba akawandisa evarume. Kuwedzeredza Yin simba rinoita maAries anotonga uye ane hukasha. Ivo vanogona kuve vanetsamwa, vane hushe, uye vanoreva. Vanogona kunge vachitsvinya uye vachimanikidza. Ivo vanowanzo kuve vanozvikudza, vanozvitutumadza, uye dzimwe nguva narcissistic.
Kana simba reYin rikabuda kunze kweTaurus, saka iyo inoita kuti Taurus igamuchire uye isabate. Taurus inogona kuve yekuzvipira, yekutsamwa, uye sulk. Ivo vanogona zvakare kuve vanongoita-vane hukasha ivo vachiwana simba mukutamba akabatwa. Ivo vanogona kumbundira kudzidza kusabatsira. Hukama hwacho hunokundikana kukura nesimba rakagadziriswa.
Aries uye Taurus Zvinhu
Kana ichikurukura zvinhu mukuongorora nyeredzi, zvinoenderana neSynastry. Kubatana iSynastry pakati pezviratidzo zviviri zvenyeredzi. Icho chiitiko ndiko kuyerwa kwedaro pakati pezviratidzo zviviri. NaAries neTaurus, ivo chimwe chiratidzo chezodhiac chakaparadzaniswa nevhiri. Iyo nhambwe pakati peAries neTaurus zvinoreva kuti zviratidzo zvine semi-sextile chimiro.
Nezviratidzo zvenyeredzi zvine semi-sextile chimiro zvinoreva kuti hunogona kuve hukama hwakanaka. Kana, hunogona kuve hukama apo vaviri vacho vanopedzisira vavengana huro hwemumwe. Izvo zvese zvinoenderana nekuyedza kunopihwa nevaviri ava kukudziridza hukama. Ndiwo mutsara wepazasi kana uchitaura nezvekuenderana kweAries neTaurus. Zvinotora EFFORT.
Tarisa maAries neTaurus sekunge vanogara munzvimbo imwechete. Vane dzimba padhuze nepadhuze. Taurus inogara mune inoyevedza-pasi furazi hombe yakakura zvakakwana kune iyo Brady Bunch. MaAries anokwereta imba diki yakakura zvakakwana maviri. Yadhi yekushongedza yakasiyana. Iko kushongedzwa kwemukati kwakasiyana. Mararamiro eaya maviri nyeredzi zviratidzo ndeepasi akapatsanuka. Asi, ivo vachiri vanokwanisa kunakidzwa nekushandisa nguva vachishanyira muvakidzani wavo. Aries anogona kukura kuti afarire zvimwe zvezvinodiwa Taurus inozvizivisawo uye zvinopesana.
Iko kunopesana zviratidzo zviviri izvi, pane zvakawanda zvekudzidza kubva kune mumwe nemumwe. Musiyano uripo pakati pavo unochengetedza hukama hwacho. Mufaro ndizvo chaizvo izvo Aries anoda kuti ugare uchifarira. Taurus inogona kudzidzisa maAries hunyanzvi hwekutsungirira uye kunonoka kugadzira rudo. Aries anogona kudzidzisa Taurus simba uye eroticism mune pfungwa yecarpe diem!
Aries uye Taurus Elements
Chiratidzo chega chenyeredzi chinoenderana nechimwe chezvinhu zvina. Muchiitiko cheTaurus, chiratidzo chenyeredzi chinoenderana neNyika. Aries anoenderana neMoto. Zvinhu zviviri izvi hazviwirirane. Pasi rine mukana wekusvira moto. Moto unopisa Nyika. Kuti hukama hweAries neTaurus hushande, ivo vanozofanirwa kufamba nemutsara wakanaka wekukanganisa uye kuenzanisa.
Iwo maAries neTaurus pairing akasiyana kubva kune mumwe nemumwe zvechokwadi! Asi, izvi hazvireve kuti hazvigoneke kuti rudo ruvare. Zvinoreva kuti pane zvipingamupinyi zvakawanda kupfuura humwe hukama hunotarisana. Kana iwo mutambo weAries neTaurus akakunda zvipingamupinyi zvakadaro, ndiwo mubayiro wakakura kune vese vadikani!
Taurus 'yepanyika zvakasikwa inoita kuti ivhu rive. Ivo vanofarira kugara pasi uye kuzviita ivo pachavo pamba. Kufambisa hakusi kwavo kwekusimudzira. Muchokwadi, dambudziko ravo hombe INERTIA. Apa ndipo pane dambudziko kare. MaAries chiratidzo cheMoto, uye iwo ese ari nezve rusununguko rweKUFAMBA. Vanosarudza ACTION pane INERTIA. Zvino, rangarirai, takaisa gondohwe nenzombe mudanga rimwe chete. Rangarira zvinoitika! Ehe, epic kurwa kuri kugadzirwa!
Kubatana pakati peMurume weAries neMukadzi weTaurus kuri nyore kuzvarwa. Zvinenge zvisingadzivisike kuti pane chinokwezva pakati pezviviri. Ichokwadi kuti pane kukwezva kwakasimba pakati pezvipesana.
Iye murume weAries anokurumidza uye nekukurumidza. Anokurumidza uye asingashiviriri. Taurus yakapfava uye ine rudo. Hunhu hweTaurus ndeuyo anofunga zvinhu kuburikidza. Kushivirira kweTaurus kunozivikanwa. Ndeupi humwe hunhu husina muAries neTaurus rudo mutambo, mumwe wacho anazvo uye zvinopesana.
Mukadzi weTaurus anovimbisa pekugara pakanaka kuti adzokere kuzuva rega rega. Iye anoshamisa anogadzira imba sezvo imba yake iri yake inoyera nharaunda. Iye chisikwa cherunyararo rwakachena saka chete posh uye zvigadzirwa zvepamusoro ndizvo zvichaita. Iwe unoda hositesi ine yakanyanya kukosha kune mumwe wako here? Aries haakwanise kuita zvirinani kupfuura mukadzi weTaurus uyo acharova chikafu chinonakidza kwazvo chakambogadzirirwa mukicheni imba! Vashanyi vebato vachapururudza kwemwedzi. Iko hakuna kunyara kuunza mukadzi wechiTaurus kumba kuti azivise kuna Amai!
Murume weAries achashanda sosi yekurudzira Taurus. Iyo Taurus Mukadzi anoda runako, asi iye ndiVenus-anotongwa uye anodawo yakawanda rudo futi. Murume weAries haana dambudziko kumunyengerera. A mashoma anotapira mazwi, machokoreti, uye akakwana mimhanzi kusarudzwa ndizvo zvese zvinotora. Mukadzi weTaurus ane hunhu uye anokwezva. Iye achatevera anotungamira murume weAries mubhedhuru. Haana kana dambudziko rekugamuchira mumwe wake.
Murume weAries ndiye anokurudzira muhukama, uye dzimwe nguva achafanirwa kuita ZVIURU zvekurudziro. Panogona kuve nezviitiko apo paanonzwa kuti anofanira kudhonza Taurus kunze kwemimvuri kuti amutore kutora chikamu muhupenyu. Inogona kushanda sechisimba chekutsamwa kana zvikaitika kazhinji. Kusada kwaTaurus kutamisa zvinokanganisa maAries neTaurus kuenderana.
Hukama uhwu hunodzokera kumashure neyaAries 'mafungiro kune uye neTaurus' maitiro. Manzwiro ehukama anozoenda kubva mukuzorora kuenda kune erootic uye kudzoka zvakare. Ivo vaviri Taurus Mukadzi uye murume weAries vane hasha dzakaipa. Ndatenda kunaka kunotora Taurus gehena yenguva yakareba kuti ive nehasha.
Dai vanamwari vabatsire chero munhu munzira kana maAries neTaurus vari kurwa! Hapana bato rinokombamira kupa kana kurega. Hondo dzavo dzinonetsa uye dzisingakanganwiki. Inogona kubva pamashoko ane hasha kuenda kunonyarara kwemazuva.
Kunyange chiri chokwadi zvinhu zvekutonga zveTaurus Woman uye Aries Man zvinopesana, vanogona kutsigira. Moto haugone kupisa kunze kwekunge uine hwaro hwekupisira. Kunyangwe moto ukava chimvuramabwe chemoto, chinofanira kusvika pasi kumwe kunhu. Moto unodziisa pakati pePasi. Zvinoreva kuti chimwe chinhu chinoda chimwe icho neimwe nzira. Saka, maAries neTaurus vanodanana.
Mukadzi weAries akasimba, akanyarara, uye tomboyish mune dzimwe nzira. Asi iye anonzwisisika uye anoyevedza kana nguva yacho ichida izvozvo. Taurus inomuwana akanaka kubva ipapo. Ndiko nekuti murume weTaurus anokwanisa kuona akananga kuburikidza neichi chinodikanwa chechikadzi chaicho chimiro. Kukwezva kwacho kunokura nekukurumidza muhukama hweAries neTaurus.
Ehe, vaviri ava vachatarisana nematambudziko akakura mberi. Iyo nzira yekuenda kune iyo Aries Mukadzi uye Taurus Man yakafanana neiyo nzira yavari kuveza. Ndiwo mugwagwa wakareba wakadhirowewa nepakati pemasango nemakwenzi emakwenzi pavanenge vachisimudza mapanga. Hapana akamboenda pamberi pavo pano, saka hapana chinouya nyore. Aries makondohwe kuburikidza nekurwa, uye Taurus anoedza kuramba akadzikama, seziso mudutu.
Chipingamupinyi chikuru chinotarisana neAries Mukadzi uye Taurus Man achasangana nawo kurwira nemanzwiro avo. Vaviri vanonzwa manzwiro ane simba risingadaviriki. Vanoda kuvimbika. Chekutanga zano rekutamba nerudo uye pane mhedzisiro. Godo rinouya richichemera vaviri ava kuti nyika yese inzwe. Zvakafanana nekupupurira ane chiuru-gore-gore djinn akasunungurwa mushure memazana emakore ekuzviparadzanisa!
sagittarius mukadzi uye virgo murume ari pamubhedha
Taurus haizomiriri ziso rinodzungaira muMukadzi weAries. Mukadzi weAries haazove neTaurus kunyangwe achitarisa munzira imwechete seumwe mukadzi. Kunyangwe iye achifarira kukwikwidza mune macabre mhando nzira, iyo Aries Mukadzi haana kana dambudziko kuisa mukadzi munzvimbo yake zvakaoma uye nekukurumidza. Asi, iye anotora kuti anogumisa muvengi wake kana zvasvika pamurume waanoda. Anorova nekukurumidza senyoka yadenhwa. Tarisa uone. Mutambo wapera.
Kuti uchengetedze maAries neTaurus rudo rwomutambarakede, iyo Aries Mukadzi uye Taurus Man vanofanirwa kutaurirana. Ivo vanofanirwa kutaura zvavanonzwa uye chengetedza hurukuro yacho yakavhurika. Kuvanza zvakavanzika kunodzivirira mhepo uye kuvimba muhukama. Aries atononoka kuvimba uye anokurumidza kutsamwa. Mukadzi weAries ari kuchinja mubazi rekutaura kwemanzwiro. Saka, Taurus inogona kumubatsira munzira. Rudo uye kugara uchidzora zvinotora nzira muhukama uhu.
Iyo Taurus Man inoramba shanduko. Mukadzi weAries anozvibvunza. Ivo vaviri vachatofanira kukotama kuti mumwe nemumwe afare. Kubvumirana makumi mashanu nemakumi mashanu kunoshanda nemazvo mumamiriro ezvinhu aya. Taurus ichafanirwa kuchinjika uye kuyerera. Aries inoda kukura zvishoma kuomarara uye kugadzikana. Iyo Taurus Man ichafanirwa kukumbundira inonakidza uye inonakidza zvinhu zvekuita. Mukadzi weAries achafanira kupa kune imwe nguva yakanyarara yekumbundira pamba nemoto.
Ukama hweAries neTaurus hunogona kuratidza chishamiso cherudo! Vanhu vaviri vakasindimara ava vanogona kudanana uye vave nehukama hunogara. Zvese zvinotora kushivirira uye kubvumirana. Wedzera dash yekunzwisisa uye kunzwira tsitsi zvakare. Tungamira zvinhu zvese pamwe neapo neapo kuda kukanganwirwa uye kushivirira. Ipapo rudo runotumbuka, uye kukwirira kweAries neTaurus kuenderana kunoitika!
Zvinoshamisika kuona maAries neTaurus anogona kuita kuenda nazvo, huh? Uri kushamisika kuti ndezvipi zvimwe nyeredzi zviratidzo zvinogona kuratidza kushamisika kudanana vaviri? Iyo mufaro wekuwanikwa ndeyako paDaily Horoscope Astros! Yako yekuongorora nyeredzi Synastry dzidzo ndeye mbeva-tinya kure! Tora nguva kuti uone kuti ndiani ari munyika yerudo uye inoenderana nyeredzi!
Wana zvakadzama info nezve Aries Munhu !
Zarura chakavanzika cheiyo Aries Mukadzi !
mifananidzo ye pluto nemwedzi yayo
sagittarius mukadzi uye aries murume pamubhedha
cancer murume uye aquarius mukadzi pamubhedha